juillet 2018 - Page 91 sur 91 -
Fahafatesan’ny reny sy ny zaza : Tsy nihena tao anatin’ny 10 taona
02/07/2018 admintriatra 0
Araka ny tarehimarika azo avy eo anivon’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka dia reny sy zaza miisa 478 isaka ny teraka ao anatin’ny iray hetsy no namoy ny ainy teto Madagasikara. Tsy nahitana fihenana io taha io tao …Tohiny
Voalohany tamin’ ny tantaran’ i Mauritanie no hampiantrano ireo filoham-pirenena sy mpikambana anatin ny governemanta miisa 55 manoloana ny fivoriamben’ny vondrona afrikanina andiany faha- 31, izay tanterahina ao Nouakchott. Lohahevitra lehibe izay mbola hodinihina dia …Tohiny
Ramatoa iray sy tovovavy 14 taona ary lehilahy roa izay nahitana ny mpamily no maty tsy tra-drano vokatry ny lozam-pifamoivoizana niseho tany amin’iny lalam-pirenena voalohany iny, izay nateraky ny Car an-dalana mampitohy an’i Manalalondo, omaly …Tohiny
« Tsy mahavaha olana »
Toa ny inona sahady ny fisehosehoana ivelany nasehon-dRavalomanana Marc teo anatrehan’ireo naratra sy niharam-boina vokatr’ilay lozam-piarakodia tany Arivonimamo omaly iny. Izy no tonga voalohany tetsy amin’ny Hopitaly Hjra. Raha tena fampaherezana ireo niharan-doza tokoa moa …Tohiny
Mandà tsy mety mamaly ny fiantsoan’ny zandarimaria noho ny raharaha ilàna azy ireo i Lalatiana sy Andry Rakotondrazafy. Fiantsoana fahatelo amin’ny androany, araka ny fantatra no tsy nahitana tohiny. Toa mampahatsiahy ny raharaha Claudine mihitsy ...Tohiny